अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव पारित गर्दै नेकपाको बैठक सकियो, केके भयो निर्णय ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव पारित गर्दै नेकपाको बैठक सकियो, केके भयो निर्णय ?
अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव पारित गर्दै नेकपाको बैठक सकियो, केके भयो निर्णय ?	एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गरिने
भदौ २६ गते, २०७७ - १७:०६
केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । प्रचण्ड अब कार्यकारी अध्यक्षको भुमिकामा कृयाशिल हुनेछन् ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितिको बैठक अध्यक्षद्वयले राखेको प्रस्तावहरु पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । प्रचण्ड अब कार्यकारी अध्यक्षको भुमिकामा कृयाशिल हुनेछन् ।
आजको बैठकमा रघु पन्त, लिलामणि पोखरेल, भीम आचार्य, माधव कुमार नेपाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, देव गुरुङ, घनश्याम भुषाल, मातृका यादव, भीम रावल, अमृत बोहरा, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अब पार्टीलाई विधि र पद्धतीमा अगाडि बढाउने र सरकार पार्टीको मागर्दशनमा चल्ने निर्णय भएको छ । सरकारको दैनिक कार्यमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत विषयमा पार्टीमा परामर्श गरेर मात्र निर्णय लिइनेछ ।
बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
असार १० गते शुरू भई पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको स्थायी कमिटी बैठक पछिल्लोपटक साउन ६ गने छोटो समयका लागि बसेको थियो । लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको स्थायी कमिटी बैठकको समापन भएको हो ।
भदौ २६ गते, २०७७ - १७:०६ मा प्रकाशित